Ciidamada Ethiopia oo ka baxay Cadaado + Ahlu-Sunna oo usoo jiheysatay |
Ciidamada Ethiopia oo ka baxay Cadaado + Ahlu-Sunna oo usoo jiheysatay
War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia ay goordhow billaabeen inay ka baxaan magaalada Cadaado ee gobolka Gal-gaduud.
Ciidamada Ethiopia oo la huwiyey magaca Amisom, ayaa magaalada u joogay inay ilaaliyaan shirka Cadaado oo madaxweynaha Galmudug loogu doortay Cabdikariim Guuleed.
“Ciidamada Ethiopia caawa fiidkii ayaa billaabeen inay baxaan, dhammaan baabuurtooda ayaa waddada ku dhaqaaqay” ayuu yiri Cali Jaamac oo ku sugan Cadaado.
Illaa iyo hadda lama yaqaan sababta ay ciidamada Ethiopia halkaas uga baxeen, balse waxaa tani ay qeyb ka tahay hagardaamadii Ethiopia ay ku heysay gobollada dhexe. Ciidamada Ethiopia ayaa markii hore diiday in ciidamada dalalka kale ee Amisom ay tagaan Cadaado, waxaana la isku haleynayey joogitaankooda.
Warar kale ayaa iyaguna sheegaya in ciidamada Ahlu-Sunna ay billaabeen inay u dhaqaaqaan dhanka Cadaado si ay u qabsadaan. Ciidamada Ahlu-Sunna ee magaalada usoo jiheystay ayaa ah kuwa aad xooggan oo Ethiopia ay soo hubeysay.
Dad ku sugan Cadaado ayaa sheegaya inay jirto cabsi dagaal. Waxaa aad looga cabsi qabaa in ciidanka Ahlu-Sunna ay isla beriri gacanta ku dhigaan magaalada.
Ethiopia oo horey madaxweyne beenaad Ahlu-Sunna ah ugu sameysay magaalada Dhuusomareeb, ayaa kasoo horjeeda maamulka cusub ee Galmudug, oo iyada iyo Puntland ay dadaal badan ku bixiyeen sidii uu u fashilmi lahaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha cusub ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa lagu warramay inuu soo gaaray magaalada Muqdisho. Guuleed ayaa shalay markii la doortay sheegay inuu wada-hadal la galayo kooxda Ahlu-Sunna.